LG Q60 na -ere na Spain na eze | Androidsis
LG Q60 ka emeputara na Spain
LG ahapụla anyị ekwentị ole na ole n'etiti ya na obere ya ruo afọ a. Otu n'ime ekwentị ndị onye nrụpụta Korea gosipụtara bụ LG Q60, a nlereanya na pụtara ìhè maka igwefoto n'azụ ya nwere okpukpu atọ. Ọ bụ ihe a na -adịghị ahụkebe nke ụlọ ọrụ na -egosipụtakarị na ngalaba a, na -eme ka ọ bụrụ ihe na -atọ ụtọ maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ugbu a, ọ bịarutere na Spain n'ihu ọha.
N'ụzọ dị otu a, ndị ọrụ ahụ nwere mmasị na LG Q60 a, Ha ga -enwe ike ịzụta ya na Spain. Ekwentị na -erute akụkụ asọmpi dị ukwuu, mana enwere mmasị igosi akụkụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ.
Anyị agaghị echere ogologo oge ịzụta ya, maka na echi, June 1, ọ ga -ekwe omume zụta LG Q60 a na Spain. A ga -ebido ya na webụsaịtị ụlọ ọrụ yana n'ụlọ ahịa anụ ahụ. Ebe a na -erekarị ekwentị ekwentị ga -adị ya.
Ekwentị na -abata na Spain n'otu ụdị, 3/64 GB, nke anyị nwere ike ịhụrịrị na nkọwapụta ya na ngosi ya. Ndị ọrụ ga -enwe ike ịhọrọ n'etiti agba abụọ na nke a, nke na -acha anụnụ anụnụ na oji. Banyere ọnụahịa ahụ, na ngosi ya ekwuolarịrị na ọ ga -efu ihe na -erughị euro 300, nke bụrịrị ikpe.
Ebe ọnụahịa LG Q60 a na Spain bụ euro 279. Ezi ọnụahịa maka ihe nlereanya ahụ, dịtụ ala karịa ihe ekwentị ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị n'etiti etiti a na-akwụkarị. Yabụ na nke a bụ ihe nwere ike inyere ngwaọrụ a aka ịre ahịa ka mma na Spain.
Ị nwere mmasị n'ọdịiche ọhụrụ nke ika a? Site echi ị nwere ike zụta ya n'ụlọ ahịa yana n'ịntanetị. A ka ga-ahụ ihe nnabata LG Q60 a sitere na akara Korea nwere na Spain, na-eburu n'uche otú akụkụ etiti dị na gam akporo si dị mgbagwoju anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » LG Q60 ka emeputara na Spain
Etu ị ga - esi gbanye ọnọdụ ịgbanye akpaka na Fortnite
Nyere nwa agbọghọ ahụ aka ịchọta obi ụtọ ebighi ebi na "isi wee hụ" obere ihe ọjọọ